Warshad gudbiyaha silsiladda Shiinaha iyo soosaarayaasha | Yuantuo
Wareejiyaha saxanka silsiladdu waa inuu ku rakibo qaybaha saxanka inta u dhexeysa silsiladaha labada dhinac ee silsilad wadaha silsiladda, si loogu qaado alaabada aan caadiga ahayn. Qalabka gaarka ah ayaa lagu rakibay saxanka silsiladda. Marka loo eego shuruudaha kontoroolka warshadaha, waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay qadka isku imaatinka, wuuna xaqiijin karaa gaarsiinta leexinta. Xuduudaha farsamo ee ugu waawayn silsiladda gudbiyaha: 1. Xaragada silsiladda: silsiladda gudbiyaha caadiga ah 2. Ballaca silsiladda saxanka: 200-1200mm 3. Xawaare gaarsiinta: 0.5m / min-15m / min 4. Conveyi ...
Wareejiyaha saxanka silsiladdu waa inuu ku rakibo qaybaha saxanka inta u dhexeysa silsiladaha labada dhinac ee silsilad wadaha silsiladda, si loogu qaado alaabada aan caadiga ahayn. Qalabka gaarka ah ayaa lagu rakibay saxanka silsiladda. Marka loo eego shuruudaha kontoroolka warshadaha, waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay qadka isku imaatinka, wuuna xaqiijin karaa gaarsiinta leexinta.
Xuduudaha farsamada ugu muhiimsan ee silsiladda gudbiyaha:
1. Chain pitch: silsilad gudbiyaha caadiga ah
2. Ballaca silsiladda saxanka: 200-1200mm
3. Xawaaraha Gaaritaanka: 0.5m / min-15m / min
4. Awood gaarsiinta: 2500kg / M
5. Heerkulka shaqada ee birta gaarsiinaysa silsiladda saxanka: - 20 ℃ - 400 ℃
Qaabka wareejinta saxanka silsiladda badanaa wuxuu ka samaysan yahay bir kaarboon ama bir bir ah, oo qaybaha saxanka silsiladda ka samaysan yihiin waxyaabo kala duwan.
Qalabka xarkaha silsiladda birta ah ee aan xarka lahayn waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta oo leh saxan silsilad caadi ah sida dusha sare iyo mashiinka hoos u dhiga sida gudbinta awoodda. Qalabka gudbinta saxanka silsiladdu wuxuu ka kooban yahay qalab koronto (matoor), usheeda dhexe ee gudbinta, rullaluistemadka, aaladda cadaadinta, jeexjeexa, silsiladda, dhalista, saliidaha, saxanka silsiladda, iwm Labada qaybood ee ugu muhiimsan ee xayawaanku gaarsiinayo waa: silsilad, oo bixisa awoodda jarista by wareeggeedii dhaqdhaqaaqa; saxanka biraha, kaas oo ah nooca xambaarsan geedi socodka gudbinta. Taarikada silsiladaha safafka badan ayaa loo isticmaali karaa si isku mid ah si loo sameeyo mashiinka xarkaha silsiladda ballaaran oo foomka xawaare u kala duwan. Adoo adeegsanaya xawaaraha farqiga u leh taarikada silsiladaha safafka badan, gudbinta safafka badan waxaa loo beddeli karaa hal saf oo keli ah iyada oo aan la bixin, si loo buuxiyo shuruudaha gudbinta hal saf oo ah calaamadda cabitaanka, buuxinta, nadiifinta iyo qalabka kale. Waxaan ka dhigi karnaa madaxa iyo dabada laba silsiladood oo saxan qaadayaal ah silsilad isku dhafan oo is dulsaaran, si dhalada (jirka) jirku u kala bixi karo Xaaladda kala guurka firfircoon, ma jiraan wax ku haray khadka gudbinta, oo buuxin kara shuruudaha dhalada madhan, cadaadiska dhalada oo buuxa iyo cadaadis aan gudbinayn.
Hore: suunka gudbiyaha
Xiga: wareejinta qalooca
Suunka Wareejinta Korantada
Wareejinta Suunka Diiran
Suunka Wareejinta Mobilada